पृथ्वीनारायण शाहलाई बिर्सनेहरु नेपाली हुनै सक्दैनन् : इतिहासविद् प्रा.डा. पोखरेल (भिडियोसहित) | Emountain TV
पृथ्वीनारायण शाहलाई बिर्सनेहरु नेपाली हुनै सक्दैनन् : इतिहासविद् प्रा.डा. पोखरेल (भिडियोसहित)
पुष २७, २०७७ पढ्न ५ मिनेट
काठमाडाैं, २७ पुष । तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाह नेपाल एकीकरण अभियानका वास्तविक नायक हुन । उनलाई गर्व गर्न लायक राष्ट्रनायक र मुलुकको अभिभावक भन्न सकिन्छ । यदि त्यतिबेला पृथ्वीनारायण शाह नजन्मेको भए र उनले एकीकरण अभियान नचलाएको भए अहिले नेपाल रहने थिएन र हामी नेपाली भन्न पाउने थिएनौं ।
स्वाधिन र सार्वभौम राष्ट्र नेपाल निर्माणको श्रेय उनैलाई जान्छ । विसं. १७७९ पुस २७ गते जन्मनु भएका शाह ५२ वर्ष बाँचेर ३२ वर्षको कार्यकालमा नेपाल एकीकरण गर्न सफल भए । अलि धेरै बाँचेको भए नेपाल अझ विशाल हुने थियो । किनभने उनमा एकीकरणको साथै नेपालको विकासको पनि दुरदर्शीता थियो । गोरखामा जन्मेर काठमाडौं उपत्यका विजयपछि उनले नेपाल एकीकरण अभियान थालेका हुन । त्यस अघि नेपाल साना साना टुक्रामा विभक्त थियो ।
भारतमा ५० बढी साना साज्य थिए । ब्रिटिशले उपनिवेश बनाउँदा एकीकरण गरेको हो । नेपाल पनि बाइसे र चौबिसे जस्ता टुक्रे राज्यहरुमा थियो । पृथ्वीनारायण शाहले यसको एकीकरण गरे । कुनै विदेशी गुहार्नु परेन । कीर्तिपुर विजयपछि स्थानीयको १७ धार्नी नाक काटिएको भन्ने अंग्रेजहरुले लेखेको इतिहास गलत र भ्रामक हो । झगडामा मारिएका बाहेक त्यति बेला कसैको नाक काट्ने काम भएकै थिएन ।
हारेर इज्जत गयो भनिएको कुरालाई नाक काटिएको भनी अपव्याख्या गरिएको हो । नेपाल एकीकरण गर्नु अघि अमेरिका ब्रिटिसको उपनिवेश थियो । नेपाल एकीकरणको एकसय वर्षपछिसम्म पनि जापान अन्धकारमय थियो । त्यतिबेला जनताको साथ र सहयोग लिएर उपलव्ध स्रोत र साधनको उपयोग गरी आपसी कलहमा फसेका ससाना राज्यलाई पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्न सफल भएका थिए । नागरिकको इच्छा सर्वाेपरि ठानी राज्य संचालन गर्थे । अहिलेको राजनीतिलाई तुलना गर्ने हो भने शाह पूर्ण लोकतन्त्रवादी राजा थिए भन्ने देखिन्छ ।
पृथ्वीनारायण शाहको जस्तो चरित्र र देशप्रेम अहिलेको नेतामा पाइदैन । त्यतिबेला विदेशीलाई स्वदेशमा राख्नु हुन्न भन्ने थियो । अहिले खुलेआम आमन्त्रण गर्ने गरिएको छ । जसले पृथ्वीनारायण शाहको शालिक ढाले, उनीहरुले नेपालको इतिहास मेट्न खोज्दैछन । पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्मान गर्नु नेपालीको दायित्व हो । जसले पृथ्वी नारायण शाहलाई बिर्सन्छ उनीहरु नेपाली हुनै सक्दैनन ।
अन्तर्वार्ताको पूरा भिडियो तल हेर्न सकिनेछ ।
राजनीति‐मा वर्गिकृतaajako sandarbha
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्युनिष्ट पार्टी र आन्दोलनलाई सिध्याउन खोजे : अध्यक्ष नेपाल
तीन प्रदेशमा दाहाल–नेपाल पक्षकाे बृहत कार्यकर्ता भेला
भारतले कोरोनाविरुद्दको १० लाख डोज खोप अनुदान दिने
पृथ्वी नारायण शाहको दिव्योपदेश सम्झनु पर्नेमा सरोकारवालाकाे जाेड
आज २९९ औं पृथ्वी जयन्ती, विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै
फोरम–नयाँ शक्ति एकीकरण अन्तिम चरणमा
पार्टी एकता टुंग्याउन नेकपाले थप मापदण्ड बनाउँदै
प्रधानसेनापति खुला म्याराथनको उपाधी आर्मीका कृष्ण बस्नेतलाई (फोटो फिचर )